Inona avy ireo akanjo raisiko rehefa mitsangantsangana? Ataoko ao anaty valizy daholo ve ny zava-drehetra? | Fitsangatsanganana tanteraka
Ana Lopez | | soso-kevitra, General
Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ny dia an-tsambo dia vahanao indray mandeha ny valizy, Ahantoninao ao anaty lalimoara ny zava-drehetra ary tsy mila manokatra sy manidy ny valizinao ianao na dia mandeha amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa aza ianao. Ity dia manana ny fakam-panahy hitondra zavatra fanampiny, noho izany dia ampirisihinay akanjo, kojakoja maro samy hafa izay manome sentetika kanto sy sosona hanafana anao.
Amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo dia hanao hetsika maro ianao, manomboka amin'ny fitsangatsanganana mankany amoron-dranomasina, amin'ny alàlan'ny afovoan-tanàna na rava lavitra, ankoatry ny fiainana amin'ny sambo iray ihany: fisakafoanana ara-dalàna sy tsy ara-potoana na fidirana amin'ny seho, dia toy izany koa ny kitapo dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny toe-javatra rehetra.
Manome anao torohevitra vitsivitsy momba ny akanjo izay tsy azonao adino amin'ny valizinao izahay araka ny filazan'ny orinasan-tsambo izay itetezanao.
1 Akanjo ahazoana aina sy tsy ara-potoana ho azy sy izy
2 Alina foto-kevitra
3 Fepetra sasany araky ny akanjo
Akanjo ahazoana aina sy tsy ara-potoana ho azy sy izy
Torohevitra voalohany dia ny maka ny akanjonao, mahatsiaro tena toa anao, aza manandrana miakanjo fotsiny satria mandeha sambo ianao. Safidio amin'ny fitafianao ny akanjo tianao indrindra, miala sasatra ianao, ka araraoty.
Ho an'ny fitsangatsanganana, na dia an-tanàn-dehibe aza izy ireo dia makà kiraro tena ahazoana aina. Ho eo akaikin'ny pisinina sy ny sambo ianao, ny flip-flop sy ny kapa, mora esorina ary apetraka dia afaka manampy anao.
Raha mitsangatsangana fiangonana ianao amin'ny fitsangatsangananao tadidio ny mitondra shawl na cardigan tsara (raha sanatria ka fahavaratra) satria ny sasany amin'izy ireo dia tsy mahazo miditra amin'ny soroka mitanjaka. Ity torohevitra ity ihany, avy amin'ny fanajana ny fomba amam-panaon'ireo firenena vangianao Manoro hevitra anao aho hanaraka azy any amin'ny toerana toa ny Emira Arabo Mitambatra na Qatar, ohatra.
Mora kokoa amin'izy ireo izany, na andro na alina, ary afaka manao pataloha fohy izy ireo, T-shirt na polo, sneaker. Mitandrema, satria na tsy ara-potoana toy ny ahoana aza ny fitsangantsanganana an-tsambo dia tsy avelan'izy ireo hiditra miaraka amin'ny akanjo fidiovana ianao amin'ny buffet, na any amin'ny trano fisakafoanana.
Andao lazaina fa ireo torohevitra ireo dia ho an'ny fitsangantsanganana fahavaratra, amin'ny toerana mafana, mazava ho azy fa handeha hitsangantsangana amin'ireo fjord norveziana ianao, ilay valizy dia hitondra karazana akanjo hafa. Azonao atao ny mamaky ny torohevitray momba an'ity karazana fitsangantsanganana ity any ity rohy ity Ary raha efa momba fitsangantsanganana an-tsambo fitsangatsanganana, na faran'izay mahery, ireo orinasam-pandefasana mitovy aminao dia manome anao akanjo, Ohatra, amin'ny fipetrahana amin'ny Arctic dia manome anao baoty, fonon-tànana ary parka ianao.
Inona no tsy tokony hohadinoinao ny andro alohan'ny fitsangantsanganana an-tsambo?
Ny alina teny amin'ny sambo fitsangantsanganana an-dranomasina, raha ny amin'ny fomba fitafy, dia voatanisa hatrany fitafiana, akanjo tsotra ary mahazatra, ary amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ny famaritana ny trano fisakafoanana, ny toro-hevitra amin'ny fitafiana iray na akanjo hafa dia torohevitra. Ohatra, raha mankany amin'ny buffet, na barbecue eny ivelany, na dia Night's Captain aza dia azonao atao amin'ny akanjo tsy ara-potoana.
Ary miresaka momba ny Alin'ny kapiteny, ny orinasan-tsambo rehetra dia manolotra sakafo hariva eny an-tsambo miaraka amin'ny kapiteny sy ny ampahany amin'ny ekipa. Fomba nentim-paharazana ho an'ny anio alina no takiana etikety hentitra, miova ny raharaha ary milamina ny zava-drehetra. Na izany aza, fotoana mety hiakanjoana amin'ny gala-nao tsara indrindra izany. Orinasa mandefa premium indrindra, toa an'i Cunard, ohatra, dia manohy mitaky fatorana mainty na akanjo hariva ho azy ireo ary akanjo hariva na fitafiana kanto hafa ho azy ireo. Mahagaga fa afaka manofa akanjo fitafiana amin'ny orinasan-tsambo iray ihany izy ireo, sarotra kokoa izany.
Ny alina manan-danja hafa eny an-tsambo dia ny Night On White, noho izany aza adino ny mametraka akanjo an'ity loko ity ao anaty valizinao, satria vitsy ny orinasam-pitaterana manohitra ny fankalazana izany ary tsy maintsy atao fotsy.
Fepetra sasany araky ny akanjo
Araka ny efa nolazainay anao etsy ambony ny fitsipi-pitondran-tena dia miala sasatra amin'ny ankamaroan'ny orinasa mpandefa entana. Na izany aza, misy ny fiheverana sasany tokony ho raisinao. Ohatra, Cunard, izay lasa toy ny orinasan-tsambo nentim-paharazana indrindra, dia tsy mamela anao hanao pataloha jeans, pataloha jeans any amin'ireo trano fisakafoanana rehetra misy azy. Ny Holland America Line, Princess na ny olo-malaza dia mandrara ny fidirana trano fisakafoanana misy kilaoty fohy na paompy. Orinasa hafa tokony hijerenao ny akanjo anaovanao dia Seabourn, Crystal, Silversea, Regent Seven.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » General » soso-kevitra » Inona avy ireo akanjo tokony horaisiko amin'ny fitsangantsanganana? Ataoko ao anaty valizy daholo ve ny zava-drehetra?